आफ्नो मनस्थिती कसरी सन्तुलित राख्ने ::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
१हातखुट्टा, काखीमुनी, गुप्ताङ्ग, अनुहारमा भएका रौं लाई सजिलै सधाका लागि हटाउने घरेलु बिधीबारे जानकारी लिनुहोस
आफ्नो मनस्थिती कसरी सन्तुलित राख्ने
प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन २१, २०७१
मानिसलाई तीन कुराले बिगार्छ भन्ने गरिन्छ, पूmर्सद, एकान्त र अँध्यारो । फुर्सदमा मानिस कि रमाईलो गर्न चाहन्छ कि त नयाँ काम । तर कतिपय अवस्थामा मानिसहरु फुर्सदिलो हुँदा दिमाग असर परिरहेको पनि हुनसक्छ । दिमागमा नराम्रा कुराहरु आउने भनेकै खाली समयमा हो । एकान्तमा मानिस बढी सोच्ने गर्छ, अपवादबाहेक मानिसका लागि यी तिनै कुराहरु राम्रा होईनन् । आवश्यक अनुसार मानिसलाई आराम र पूmर्सद पनि चाहिन्छ । तर पूmर्सदिलो हुने मानिसहरुले आफूलाई सन्तुलनमा राख्नु पर्छ । आफुलाई सन्तुलनमा राख्ने केही टिप्स तल उल्लेख गरिएको छ ।
१.फुसर्दमामा व्य स्त
बैंक, कफि सप, रेस्टुरेन्ट, फिल्म सुरु हनु भन्दा अघिको ५ मिनेट, कसैलाई कुर्दै गरेको समय, ट्राफिक जाममा परेको समय, बसमा बसेको समय यस्तो समयमामा तपाई के गर्नु हुन्छ ? पक्कै पनि पुराना कुरा सोध्नुहुन्छ । मस्तिस्कमा पुराना कुरा आउन नदिनका लागी तपाइले त्यो समयमा कल्पना गर्नुहोस् । कुनै पनि शब्दलाई पछाडि बाट पढ्ने कोसिस गर्नुभएको छ ? अब गर्नुहोस् , कुनै एक अंकलाई गुणान गर्दै त्यहाँसम्म पु¥याउनुहोस् जहाँसम्म तपाईंको सोचले बाटो पाउँछ, कुनै एक बस्तुलाई कल्पना गर्नुहोस् र सोही बस्तुको संङख्यालाई कल्पनामै जोड गर्दै जानुहोस् ।
२. आफैंलाई प्रश्न
आफुले विश्वास गर्ने हरेक कुरा लाई गहिरीएर सोच्नुभएको छ ? तपाईको हरेक निर्णय तपाइको विश्वासमा आधारित हुन्छ । तपाइको हरेक विश्वासलाई गहिरीएर सोच्नुहोस् , तपाईले ति कुरा किन र के को आधारमा विश्वास गरिरहनु भएको छ त । तपाईलाई यउटा कुनै बस्तु मन पर्छ भने किन मन पर्छ त ? तपाईलाइ मन पर्ने हरेक कुरा , मानौ तपाईलाई चकलेट एकदम मन पर्छ । अब सोच्नुहास् तपाइले यदि बिहान नास्तामा चकलेट खानाको सट्टा चकलेट , खाजामा चकलेट , राति खानामा पनि चकलेट , सुत्दा पनि चकलेटमाथि , लुगा पनि चकलेटकै यदि यस्तो हुने हो भने मन पथ्र्योा आफैलाइ प्रश्न गर्नुहोस् आफ्नै विश्वासमा प्रश्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस् कल्पना गर्नुहोस यदि कुनै बस्तु नभएको भए के हुन्थ्यो । साथिहरुलाई पनि सोध्नुहोस उनिहरुको रुचि र कल्पना गर्नुहोस् ।
३ शरीरलाई नयाँ मोड
नयाँ तरिकामा आफ्नो शरीरको उपयोग गरेर आफुले नयाँ कुरा सिक्न र दिमागको विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ । घरमा बसेको समयमा उल्टो हिड्ने प्रयास गर्नुहोस् , भ¥ङमा उल्टो हिड्ने कोसिस गर्नुहोस् । योगा , डान्स , माहर्शल र्आट गर्नुहोस् । हातका औंलाले खुट्टाका औंला छुने , दुबै हात ढाडको पछाडि लगेर छुने दुई हातमा उभिने जस्ता कार्यहरुले तपाईको स्वास्थ संगसंगै तपाईको मस्तिस्कमा पनि ठुलो फाइदा पु¥याउाँछ । तपाईले हातका दुई औलामा पेन राखेर घुमाउने प्रयास गर्नुभएको छ ?
४. आँखालाई नयाँ स्वाद
टि.भि धेरै मात्रामा हेर्नु हुन्छ भने १–२ हप्ता टि.भि त्यागीदिनुहोस , तपाई एउटा सस्तो अथवा निशुल्क कला केन्द«मा जानुहोस् चाहे त्यो नराम्रो किन नहोस तपाईलाई ति चित्रका फरक स्वादले केहि न केहि अनुभुति दिने छ , केहि कल्पना गराउने छ र केहि सोच्न बाध्य बनाउने छ । हलिउड फिल्म , वृत्तचित्र , डरलाग्दा फिल्म, कमेडि कार्यकर्म हेर्नुहोस् जुन तपाईले त्यति ध्यान पहिले दिनु हुन्न थियो अथवा तपाईलाई मन पर्दैन थियो । डिस्कभरी , एनिमल प्लानेट , कार्टुन च्यानल पनि हेर्ने गर्नुहोस । तपाई आफैलाई एउटा नयाँ रुप दिनुहोस् । जसले तपाइको मस्तिस्कमा नयाँ जानकारी नयाँ सोच ल्याइदिन्छ ।
तपाई यदि नयाँ नयाँ गाना सुन्नुहुन्छ भने अब पुरानो गाना सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् । हिपहप , स्लो , सफ्ट , मेटल , झ्याउरे सबै गाना सन्ने र ति गानाका शब्दलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस । त्यसले तपाईको शाररीक मात्र नभएर मानसिक रुपमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । टि.भि भन्दा रेडियोमा कथा , समाचार , अरु कार्यकर्म सुन्ने बानि राख्नुहोस , जसले तपाईको कल्पना गर्ने क्षमता बढाइदिन्छ ।
६.नयाँ मान्छे र उनीहरुको जिवनशैली बारे पढ्ने
पुराना चिनेका मान्छेको चियोचर्चो र कुरा काट्ने गर्नु भन्दा त्यो समय नयाँ चर्चित मान्छे ठुला मान्छेको बारेमा केहि खोज गर्नुहोस । अहिले त हामीलाई इन्टरनेटले नयाँ कुरा जान्न पनि धेरै मदत गरेको छ । आफ्नो उमेरको मान्छे भन्दा बुढाबुढी मान्छे , आफुभन्दा जानेबुझेका , ठुला मान्छे संग बढि समय बिताउनुहोस । बुढाबुढी मान्छेलाई उनिहरुको बाल्यकाल र जवानीको बारेमा सोध्नुहोस । मान्छेको मनोबिज्ञान आफै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस । नयाँ मान्छेसंग बोल्ने गर्नुृहोस ।
७.नयाँ कुरा सिक्नुहोस्
तपाईको समाजमा धेरै मानिषहरु विभिन्न पेसामा लागेका ह्ुन्छन् तपाईले पनि सबैसंग राम्रो सम्बन्ध राखि उनिहरुसंग उनिहरुको पेसाको बारेमा बुझ्ने उनिहरुका काम जस्तै कला इतिहास , टोकरी बुन्ने , ऊनका कपडा , व्यापारीक कुरा , सहरबजारमा के सामानको भाउ कति छ । युट्युवमा विविन्न सेमिनारका , भाषण , छलफलका भिडियो हेर्नुहोस । नयाँ भाषा सिक्नुहोस् , आफुले सधै पढ्ने किताबलाई उल्टोबाट पढ्नुहोस । अक्षरसंग खेल्ने प्रयास गर्नुहोस , एैना अगाडि कपि राख्दा मात्र पढ्न मिल्ने गरि लेख्नुहोस , उल्टो लेख्नुहोस , नजाने पनि चित्र बनाउने प्रयास गर्नुहोस । राननितिक कुरा , धार्मिक कुरा , रमाइला कुरा , फिल्मका कुरा सबैमा चासो राख्नुहोस । पत्रपत्रिका नियमित पढ्नुहोस ।
८.खान पिनमा फरकता
खाना , दाल , तरकारी सधैको खाना सबैको खाना , बानि बदलेर हेर्नुहोस । कहिल्लै नखाएको कुरा एकपटक खाएर हेर्नुहोस । नेपाली खाना त सधै खाईन्छ , चाईनिज , ईन्डियन , कोरियन यस्ता खानाको पनि स्वाद लिनुहोस् ।
अहिले कम्पुटर नचलाउने मान्छे कमै हुन्छन् तर कम्पुटर बनाउन प्रयलाई आउदैन । कम्पुटर बनाउने मान्छेले पनि सिकेर नै बनाउन सकेका हुन् त्यसो भए तपाईले किन नसिक्ने त । इलेक्ट्रिक सामान जोड्ने प्रयास गर्नुहोस । सबै कुरा सबैलाई सिक्न गाह्रो हुन्छ तर आफुले सकेसम्म जानेसम्म भ्याएसम्म सिक्नलाई कहिल्यौ पनि पछि पर्नु हुदैन ।
१०. नसोचेको काम
यदि तपाईले अहिले सम्म संगितिक साधन बजाउनु भएको छैन भने बजाउनु होस , एक दिन भरि कति बज्यो भनेर नहेरी बस्दा कस्तो होला ? आखाँ बन्द गरेर मोबाइल चलाउने कोसिस गर्नुभएको छ ? खुला बाटोमा हिड्दा १० पाइला १५ पाइला आखाँ चिम्म गरेर हिड्नुहोस । कबिता लेख्ने प्रयास गर्नुहोस चाहे रामा्रे बनोस या नरामा्रे , कथा बनाउनुहोस । बोलिमा फरकता ल्याउनुहोस , नरामा्रे होइन रामो्र फरकता । आखाँ चिम्म गरेर १० पटक लामो सास फेर्नु भएको छ ? बन्जि जम्प , र्याफटिङ , प्यारागल्लाईडिङ जस्तो साहासीक अनुभवले पनि तपाईको सोच्ने कल्पना गर्ने क्षमतालाई अझ यर्थाथवादी बनाईदिन्छ ।